Manome mpihazakazaka mpandefa onjam-peo Radio 2021 ambiny sy efitrano mangatsiaka kalitao misy fiantohana kalitao 1 taona izahay. Izahay dia manokan-tena amin'ny saha fitahirizana trano fitahirizana mandritra ny 25 taona. Manantena izahay fa ho mpiara-miasa maharitra any Shina.
Mpandeha an-tsambo radio 2021 ambiny sy efitrano mangatsiaka avo lenta miaraka amin'ny taratasy fanamarinana SGS.BV sy TUV
1.Product fampidirana mpihazakazaka mpandefa radio
Hegerls radio shuttle runner dia fomba fitehirizana avo lenta. Mety ho voalohany amin'ny voalohany na voalohany amin'ny farany. Tsy mila lalantsara be loatra ary mety hampiakatra ny toeram-pivarotana 50%.
Size Fampidinana Haingam-pandeha atraka Bateria
4.3 asa lehibe 5 fidirana, famoahana, fidirana mitohy, famoahana tsy tapaka, lisitra, famindrana pallet.
Teo aloha: Fampielezam-peo amin'ny radio HEGERLS
Manaraka: Warehouse Racking Shuttle Industrial Storage Racks System